कालो वर्णका बलिउडका यी अभिनेत्रि एकाएक कसरी भए गोरो ? यस्तो छ भित्री रहस्य ! - Purbeli News
कालो वर्णका बलिउडका यी अभिनेत्रि एकाएक कसरी भए गोरो ? यस्तो छ भित्री रहस्य !
प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर ०९, २०७५ समय: २०:०९:२६
विश्वका ठुला उद्योग मध्य बलिउड फिल्म उद्योग पनि एक हो ।जति पनि बलिउडमा फिल्म र फिल्मकर्मी छन् प्राय सबैको विश्वभर नै चर्चा छ । भारतले विकासमा निकै फड्को मारेको छ । आधुनिकता र विकास प्रविधिको आविष्कार बढेसँगै बलिउड फिल्म उद्योगमा फिल्मले र अभिनेत्रीहरुले पनि आफ्नो रुप परिवर्तन गर्न थालेका छन् । बलिउडमा यस्ता कलाकार छन् जो पहिला काला भएपनि अहिले धेरै गोरा भएका छन् ।धेरैले आफ्नो अनुहारमा चमक ल्याउन प्लास्टिक सर्जरी गर्छन् । बलिउडका केही यी कलाकार जो पहिला काला भएपनि अहिले धेरै गोरा भएका छन् ।
दीपिका पादुकोण – भर्खरै बिबाह बन्धनमा बाधिएकी बलिउड चर्चित अभिनेत्रि दीपिका पादुकोण जो बलिउडमा मात्र नभएर हलिउडमा समेत आफ्नो स्थान जमाइसकेकी छन् । अभिनेत्री दिपिका पादुकोण कालो वर्ण भित्र पर्ने अभिनेत्री हुन् । पछि उनले स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेन्ट गरेपछि उनको अनुहारमा चमक आएको हो ।
प्रियंका चोपडा – बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री प्रियंका चोपडाको अब डिसेम्बरमा निक जोनस सँग बिबाह हुदै छ ।उनी चर्चित अभिनेत्री मध्येकी एक हुन् उनी पहिले भन्दा धेरै फरक रहेकी छन् । पहिला कालो वर्णकी उनी अहिले गोरी देखिने गर्छिन् । प्रियंकाले कस्मेटिक सर्जरी गरेर गोरी बनेकी हुन् ।
शिल्पा शेट्टी – शिल्पा पहिले र अहिलेमा धेरे फरक देखिने गर्छिन् । कालो वर्णकी शिल्पाले प्लास्टिक सर्जरी गरेर अनुहारमा चमक ल्याएकी हुन् ।
काजोल- एक समय बलिउडमा एकछत्र राज गरेकी काजोलले पनि अनुहारको सर्जरी गरेर सुन्दर बनेकी हुन् । उनी पछिल्लो समय फिल्महरुमा भने खासै देखिएकी छैनन् ।